Ọrụ anyị | Law and More BV | Eindhoven na Amsterdam
Law & More bụ ụlọ ọrụ iwu siri ike nke Dutch nwere njirimara mba ụwa, ọkachamara na mpaghara dịgasị iche iche nke iwu Dutch. Anyị na-asụ Dutch, Bekee, French, German, Turkish, Russian na Ukrainian. Firmlọ ọrụ anyị na-enye ọrụ n'ọtụtụ akụkụ nke iwu maka ụlọ ọrụ, gọọmentị, ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu. Ndị ahịa anyị si Netherlands na mba ofesi bịa. A maara anyị maka mbọ anyị, ụzọ dị mfe, nke a na-akwọ ụgbọala, nke enweghị isi.
EGO NA NKWA?
Họpụ LAW & MORE AHỤ
Na-enye ume ọhụrụ. Gbado anya na ndị ahịa.
Law & More na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ, rụọ ọrụ nke ọma yana nsonazụ nsonazụ.
NWAANYI IJU EGO
Ọ ga-amasị gị imepụta nkwekọrịta? Law & More na-enyere gị aka
Ọgụgụ isi nke arịa ọgụgụ isi
You chọrọ inweta ikike nke ihe okike gị ma ọ bụ mee ihe megide emebi emebi ikike gị Anyị nọ n’ọrụ gị
Tgwọ lawyerchịkọta ọkàiwu
You na - emeso ndị ahịa na - akwụghị ụgwọ? Kpọtụrụ Law & More
Everylọ ọrụ ọ bụla pụrụ iche. Ọ bụ ya mere ị ga-eji nweta ndụmọdụ gbasara iwu gbasara ụlọ ọrụ gị.
Divorcegba alụkwaghịm bụ ihe na-agwụ ike. Anyị na-enyere gị aka na usoro a
You ga-achọ ịmatakwu gbasara iwu okirikiri na Netherlands? Biko kpọtụrụ anyị
Iwu ICT na iwu ịntanetị etolitela ngwa ngwa. Mee gwaa onwe gị
Enwere otutu ọnọdụ ebe iwu mpụ na-arụ ọrụ. Rịọ ihe ọmụma banyere iwu
na Law & More ị ga-ahọrọ ụlọ ọrụ na-ahụ maka iwu na-arụpụta ihe na Netherlands
Anyị bụ ụlọ ọrụ iwu dị ike nke Dutch nwere njiri mara mba ụwa, ọkachamara na mpaghara dịgasị iche iche nke iwu Dutch. Anyị na-asụ Dutch, Bekee, French, German, Turkish, Russian na Ukrainian. Firmlọ ọrụ anyị na-enye ọrụ n'ọtụtụ akụkụ nke iwu maka ụlọ ọrụ, gọọmentị, ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu. Ndị ahịa anyị si Netherlands na mba ofesi bịa. A maara anyị maka mbọ anyị, ụzọ dị mfe, nke a na-akwọ ụgbọala, nke enweghị isi.
You nwere ike ịkpọtụrụ Law & More Fọrọ nke nta ihe niile ịchọrọ onye ọka iwu ma ọ bụ onye ọka iwu ndụmọdụ.
• Ihe gị na-amasịkarị anyị mgbe niile;
• Anyị na-adị mfe mbịakwute;
• N'ihi nsogbu nke corona, agba anyị niile na-ewere site na ekwentị ma ọ bụ oku vidiyo. Oku vidiyo nwere ike ime site na WhatsApp, Skype, Duo, Zoom, Teams, Bluejeans or Webex;
• Enwere ike ịkpọ oku n'ụlọ n'ekwe ntị (+ 31403690680 or + 31203697121), email (email)[email protected]) ma ọ bụ site na ngwa anyị dị n'ịntanetị lawyerappointment.nl;
• Anyị na-ebu ọnụego ezi uche dị na ya ma na-arụ ọrụ n'ụzọ doro anya;
• Anyị nwere ọfịs na Eindhoven na Amsterdam.
Ajụjụ a kapịrị ọnụ ma ọ bụ ọnọdụ gị abụghị na weebụsaịtị anyị? Egbula oge ịkpọtụrụ anyị. Eleghị anya anyị nwere ike inyere gị aka.
Nleta NA Ndụmọdụ Ndụmọdụ
Ihe niile banyere nhazi ego
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle mgbe ị na-ere ahịa. Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ma sie ike bụ mgbe ire ere. Mkparịta ụka nwere ike ịdaba ebe a, dịka ọmụmaatụ, n'ihi na onye zụrụ ahịa adịghị njikere ịkwụ ụgwọ zuru oke ma ọ bụ enweghị ike ịnweta ego zuru oke. Otu n'ime […]
Kedu ihe bụ njikọ iwu?
Na njikọ nkekọrịta gụnyere ịnyefe mbak nke ụlọ ọrụ na-emekọrịta ihe doro anya site na aha ahụ. Okwu njikota nke akụ na-ekwukwa, n'ihi na ụlọ ọrụ ọzọ weghaara ụfọdụ akụ na ụgwọ nke ụlọ ọrụ. Okwu iwu merger na-ezo aka nanị na iwu kwadoro ụdị […]
Gba alụkwaghịm na ụmụaka: nkwurịta okwu bụ isi
Ozugbo emere mkpebi ịgba alụkwaghịm, e nwere ọtụtụ ihe a ga-ahazi ma si otú a tụlee. Ndị di na nwunye na-agba alụkwaghịm na-achọpụtakarị onwe ha na-akpali akpali mmetụta uche, na-eme ka o sie ike ịbịaru nkwekọrịta ndị ezi uche dị na ha. Ọ na-esikwu ike karị mgbe ụmụaka metụtara. N'ihi ụmụ, ị bụ…